पासा पुचः गुठी युकेको अध्यक्षमा प्रजापति — Arthatantra.com
Arthatantra.com > प्रवास > पासा पुचः गुठी युकेको अध्यक्षमा प्रजापति
लण्डन । बेलायतमा नेवार सुमदायको साझा चौतारीको रुपमा परिचित संस्था पासा पुचः गुठी युके साउथ–इष्ट इकाईको छैंठौ बार्षिक साधारण सभाबाट सुशील प्रजापतिको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।
लण्डनको प्लमस्टिडको व्हाइट हार्ट रोडस्थित साल्भेसन आर्मी हलमा भएको कार्यक्रममा रफत सञ्चार क्लवका विदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका प्रजापति अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । १९ कार्यसमिति चयनमा उपाध्यक्षमा क्रमशः सचिन श्रेष्ठ, मदन श्रेष्ठ, माधवलाल श्रेष्ठ तथा महासचिवमा नगेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यस्तै सचिवमा योगेन्द्र कर्माचार्य, साँस्कृतिक सचिवमा विनोद चिपालु र अशोक अवाल, कोध्षाध्यक्षमा बुद्धि श्रेष्ठ र सह–कोषाध्यक्षमा ध्रुर्व श्रेष्ठ रहेका छन् भने सदस्यहरुमा क्रमशः भिम लक्ष्मी शाक्य, स्नेहा श्रेष्ठ, शिवराम श्रेष्ठ, सोनी श्रेष्ठ, प्रकाश महर्जन, भगवान श्रेष्ठ, विजय कुमार श्रेष्ठ, रिता श्रेष्ठ र निरपेश श्रेष्ठ रहेका छन् ।
नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षणका साथै नेपाल सम्बन्धि बिभिन्न गतिबिधि सञ्चालन गर्दै पासा पुचले युकेमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल रहेको अध्यक्ष प्रजापतिले बताए । उनले भने नेपालीहरुलाइ साह्रो गाह्रो पर्दा समेत उक्त संस्थाले सक्दो सहयोग गर्दै आएको छ ।
५ असार २०७३, ३।००
२०७३ असार ५ गते १७:०९ मा प्रकाशित
बजाजले घटायो, पल्सर १३५ एलएसुको मूल्य
अमेरिकाले नेपालमा खोल्ने भो ३ सय २२ उद्योग, सात अर्ब ३३ करोड लगानी !
डेढ महिनाभित्रै सगुनले निकाल्दै मिनी आइपिओ, सामाजिक सञ्जालकै इतिहासमा पहिलो !
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित